Wakaalada Jidadka Ethiopia oo Codsatay in la Kordhiyo Xisaabta ay Haysato – Rasaasa News
Addis Ababa, December 29, 2011 [ras] – Wakaalada Jidadka Ethiopia, ayaa dawlada ka codsatay in lacag dheeraad ah la siiyo. Saraakiil ka tirsan wakaalada jidadka ayaa sheegay in miisaaniyada wakaalada ee shanta sano oo ah 81.1 bilyan oo Birr ayna ku filayn baahida qorshaha ku talo galka horumarinta ee waaxda jidadka .
Wakaalada Jidadku [Ethiopian Road Authority (ERA)], waxay u baan doontaa lagcag qiyaasteedu tahay 18 bilyan oo Birr, taas oo ah 20% miisaaniyada wakaalada ee hada. Si ay u bilowdo wakaaladu mashaariic cusub, inu dhamaystirto mashaariicda socota waa in ay heshaa lacag dheeraad ah sidaas waxaa laga soo xigtay saraakiisha wakaalada Jidadka.
Wakaaladu waxay ka heshay xoogaa ifafaalo ah masuuliyiinta sare ee dawlada in lacag dheeraad ah loo meelayn doono, in kasta oo aan la cadayn inta ay tahay lacagta la ogolaaday.
Waxaada dhismaha, ayaa waxaa si weyn u saameeyey koradhka qiimaha uu keenay sicir bararku oo ka sareeya 30% qiimihii jaan goynta ee ay hore wakaaladu heshiisyada ugula gashay dhismaha jidadka, sida ay sheegtay wakaalada ERA.
Wakaaladu waxay rajaynaysaa in ay dhisto 100,000 KM, oo jidad cusub ah shanta sano ee soo socota. 34.8 bilyan oo Birr oo ka mid ah 81.1 bilyan miisaaniyada ay heshay wakaaladu waxaa loo isticmaali doonaa dhismaha isku xidhka jidadka. Inta hadha lacagta waxaa loo isticmaali doonaa dayactirka iyo casriyeynta jidadka isku xidhka iyo jidadka waaweyn.
Wakaalada Jidadka ee Ethiopia, ayaa waxay wadaa hawlaha horumarinta ee ugu muhiimsan dalka oo dhan, waxayna haatan gacanta ku haysaa 8,300km oo laami ah iyo 14,000km oo ah Jay ah guud ahaan dalka. Isku xidhka jidadka oo ay ku jiraan federalka, gabalada iyo degmooyinka ayaa kordhay 27,000km ilaa iyo 54,000km